'एमालेसँग मोर्चाको दुस्मनी छैन तर मूल्य चुकाउन तयार भए हुन्छ' - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
‘एमालेसँग मोर्चाको दुस्मनी छैन तर मूल्य चुकाउन तयार भए हुन्छ’
आन्दोलन मधेसी मोर्चाले सरकार विरुद्ध गरिरहेको छ । तर आक्रो एमालेप्रति धेरै देखिन्छ । संविधान संसोधनमा सीमाकन वाहेक जान प्रमुख दलहरु तयार छन् तर मोर्चाले अडान छाडेको छैन । अब मोर्चाको आगामी बाटो के हो ? एमाले साच्चिकै मोर्चाको दुस्मन होत ? यीनै विषयमा सदभावना पार्टीका सअअध्यक्ष मोर्चाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णसँग गरिएको छोटो कुराकानी
सिंहदरबार र संसदको नजिक आइसक्नु भएको थियो फेरि टाढा भाग्नुभयो नी ?
नजिक त सधै नै नजिक नै छौ । तपाईले भन्न खोजेको मधेसी मोर्चाले उठाएको मुद्दाका विषयमा होला । त्यसमा हामी छाढा गएका हैनौ हामीलाई टाढा धकेल्ने काम भएको छ । संविधान जारी गरेको अवस्थामा पनि गोलीबाटै संविधान जारी गरियो । अहिले संविधान कार्यान्वयन गर्ने बेलामा पनि गोलीको बलमा हामीलाई टाढा धमेल्न खोजिएको छ । तर हामी हिजो किन नजिक आयौ र अहिले टाढा किन भयौं भन्ने सन्दर्भमा सरकारले सोच्नुपर्छ । सरकारले समयमा सोचेन भने त्यसको मूल्य पनि सरकारले नै चुकाउनुपर्नेछ ।
मूल्य चुकाउनुपर्ने तपाईहरुसँग होकी जनतासँग हो ?
को को सँग चुकाउनुपर्ने हो त्यो समयले बताउनेछ ।
भनेपछि मूल्य तिर्नुपर्ने नेपाली जनताभन्दा पनि कोही अर्कै शक्ति छ ?
हिजो नयाँ सरकार हाम्रो समर्थनमा बनाइयो । तीन बुँदे समझदारी भयो । सझदारीमा के भनिएको छ मौखिक रुपमा प्रधानमन्त्रीले त्यो भन्दा पनि पर पुगेर बोल्नु भएको छ । हामी सम्झौता गर्दा गर्दै ८ महिना वर आइसकेको छौ । नेकपा एमाले मधेसी मोर्चा नेपाली नै होइनन भन्ने शैलीमा उत्रिएको छ । संविधान संसोधनमा पनि त्यही गरिरहेको छ । हिजो संसदमा टेबुल गर्न दिएनन अहिले संसोधन हुन दिन्नौ भनिएको रहेको छ । मधेसीमा वेठिक समयमा मधेसी मोर्चालाई देखाउनका लागि नै एमालेले एमालेले मेची–महाकाली यात्रा सुरु लिएर गयो । सप्तरमिा पुगेपछि जुन दुर्घटना भयो अब त्यसको मूल्य सरकारले पनि चुकाउनुपर्नेछ । सप्तरीमा भएको घटनाले कोही नेपाली जनता पनि खुसी छैनन ।
तपाईहरुलाई सप्तरीको घटनाले आन्दोलन गर्ने बल दिएको छ भन्छन् नी ? खुसी नभए पनि धेरै दुःखी बनाएको छैन होइन तपाईहरुलाई ?
हाम्रो मान्छेलाई मार्ने हामी कसरी खुसी हुन सक्छौ । यस्तै अफवाह फैलानाले मधेसीमा झन आक्रोस असन्तुष्टि बढ्दै गएको हो । तर मधेसी जनतामा पनि सप्तरी घटनाले एमाले र सरकारप्रति आक्रोस थपिएको भने पक्का हो । अब उनीहरुलाई आन्दोलनमा भने उर्जा थपिएको छ । जनताको आक्रोश जनताको भावना हो । त्यो आक्रोश सरकार र एमालेले थपिदिएको हो । त्यसकारण अब हामी जनताकाबीचमा गइसकेको छौ । वार्ता हामीले छाडेका छैनौ । तर वार्ता पनि छाडेर जाने अवस्था नआहोस भन्नेमा सरकारले सोच्नुपर्छ ।
तपाईहरुको आन्दोलन खासमा एमाले विरुद्ध होकी सरकार विरुद्ध ?
हाम्रो आन्दोलन कसैको विरुद्धमा होइन । हाम्रो आन्दोलन मधेसी जनताका पक्षमा हो । जसले मधेसी नागरिकमाथि हिजो जस्तै शोषण गर्न खोजिरहेको छ । जो मधेसी जनताको भावनाको विरुद्धमा जान खोज्छ उस विरुद्ध नै हाम्रो आन्दोलन हो । मधेसी जनताको विपक्षमा को को छन् ? अहिले सबैले देखिरहेका छन् । त्यसकारण कुनैपनि पार्टीसँग हाम्रो केही दुस्मनी छैन । तर कुनै पार्टी मधेसी जनताको विपक्षमा एजेण्डा बनाएर जान्छ भने हाम्रो आन्दोलन उ प्रति नै हो भन्न बाध्य होइनेछ ।
तर तपाईहरुको तारो एमाले जस्तै देखिन्छ नी ?
हाम्रो तारो एमाले होइन एमालेको तारो मधेसी जनता भएका छन् भन्ने हाम्रो बुझाई हो । मधेसीप्रति अविस्वास गर्नु, मधेसीहरुलाई अधिकार नदिनु, मधेसीलाई अधिकार दियो भने देश विखण्डन हुन्छ भन्नुको अर्थ के हो ? एमालेले मधेसीमाथि नानाथरी आरोप लगाउने, मधेसीको भावनामा ठेस पुर्याउने अनि हामीले एमालेले अन्याय गरेको छ भन्दा पनि एमालेलाई तारो बनायो भन्ने हुन्छ ? एमालेमाथि अरु दलभन्दा असन्तुष्टि बढी भने निश्चित रुपमा छ ।
त्यही भएर एमालेलाई मधेसमा कार्यक्रम नै गर्न पाइन्न भनेको ?
हामीले कार्यक्रम गर्न रोक लगाएका छैनौ । कुनै अवरोध पनि गरिएको छैन । जनताले आफै विरोध गर्छन भने हामीले नगर भन्न मिल्दैन । एमालेका कारण नै विरोध भएको हो । मधेसका जनता एमालेले बोकेको एजेण्डामा विरुद्धमा उत्रिएका हुन् । मोर्चाका कुनैपनि दलले कार्यकर्ता परिचालन गरेका छैनन ।
अनि मधेसमा हाम्रो कार्यकर्ता मारिए भनेर आन्दोलनमा जान्छौ चै किन भनेको त ?
मारिएका व्यक्ति मधेसका सर्वसाधारण नागरिक हुन । उनीहरुको पक्षमा बोल्नु हाम्रो दायित्व हो । उनीहरु मधेसका नागरिक हुन त्यसकारण हामी मधेसीमाथि हुने हरेक हस्तक्षेपको विरोधमा हुन्छौ ।
तपाईहरु स्थानिय तहको चुनावमा जान डराएर प्रदेशको चुनाव गरिरहेको हो ?
डराएको होइन । सैद्धान्तिक रुपमा हामीले गरिरहेको कुरा सही छ । सैद्धान्तिक हिसाबले कुरा गर्दा स्थानिय तहलाई प्रान्त अन्तर्गत राखिसकेपछि मात्रै त्यसको चुनावमा जादा ठीक हुन्छ भन्ने हाम्रो तर्क हो । संघीयतामा देश त गयो तर, नाम मात्रको प्राप्तले के अर्थ ? जब केन्द्र र स्थानिय तह हुने प्राप्त नहुने हो भने संघियताको के अर्थ ? प्राप्त विनाको स्थानिय तहको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? यसमा हाम्रो विमति हो ।
तर अहिले नै संविधान संसोधनको माग पुरा हुन्छ भने भोलि हामी स्थानिय तहको चुनावका लागि अभियान लिएर मधेसमा जान्छौ । स्थानिय तहको संरचना पनि अमिल्दो छ । जहाँ जनसंख्या धेरैछ त्यहाँ संख्या कम जहाँ जनसंख्या कम छ त्यहाँ धेरै । यस्तो कसरी हुन्छ ? केवल १७ प्रतिशत भूभागमा ५१ प्रतिशत जनता बसेको छ बाँकी ८३ प्रतिशत भूभागमा ४९ प्रतिशत मात्र जनसंख्या छ प्रतिनिधित्व सबैको भूगोल अनुसार गर्ने हो भने मधेसको प्रतिनिधित्व हुँदैन । प्रतिनिधित्व जनताको हुन्छ न कि जनावरको । जनवार, जंगल भए भूगोललाई मात्रै आधार बनाउदा ठीक छ नभऐ जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्वको कुरा लागु हुनुपर्छ ।
दुई नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको संख्या त धेरै नै थपियो त ? चित्त बुझेन त्यतिले ?
चित्त बुझाउनुपर्ने हामीले भिख मागेको हो र ? हामीले सिद्धान्तको कुरा गरिरहेका छौ । सिद्धान्त अनुसार कुरा नमिलेसम्म हामी सहमति जनाउने पक्षमा छैनौ । जनसंख्यालाई आधार मान्नेहो भने अझै ५० भन्दा पनि संख्या थप्नुपर्छ । अर्को कुरा मधेस भनेको दुई नम्बर प्रदेश मात्रै होइन ।
सीमांकन वाहेकका विषयमा सहमति गरेर जाने खण्डमा एमाले पनि तपाईहरुका माग पुरा गर्न तयार छ नी त ?
त्यो उदारो सहमति हुन सक्दैन । भोलि पुरा हुन सक्ने अहिले माग पुरा हुन नसक्ने किन ? हाम्रो मुख्यउ माग नै सीमांकन हो । त्यसकार(ण हामी सीमांकन छाडेर संविधान संसोधनमा सहमति गर्न सक्दैनौ ।
अब के गर्ने त ? समाधानको सुत्र केही छ तपाईहरुसँग ? के तपाईको माग जस्ताको तस्तै पुरा भएमात्रै हुने हो ?
हामीले प्रष्ट रुपमा मागहरु राखिसकेका छौ । हामीले माग राखेको डेड बर्षभन्दा बढी भयो । अझैसम्म पनि हाम्रो बुझन किन नसकेको ? संविधान संसोधन प्रस्ताव पारित गरौ । हाम्रो माग पहिला प्रदेशसभा हो तर हामी त्यो छाडेर स्थानिय तहको चुनावमा जान तयार छौ । त्यही हो समाधानको सुत्र ।